Rasmi: Xulka Brazil oo xilka tabebarinamada ka xayuubisay Dunga badalkiisa u magacowday Adenor Leonardo | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Rasmi: Xulka Brazil oo xilka tabebarinamada ka xayuubisay Dunga badalkiisa u magacowday Adenor Leonardo
Rasmi: Xulka Brazil oo xilka tabebarinamada ka xayuubisay Dunga badalkiisa u magacowday Adenor Leonardo
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 21-06-16 8:22 AM Brazil ayaa si rasmi ah usoo bandhigtay tababareheeda cusub Adenor Leonardo Bacch oo aad u garan ogtahay Tite, kaasoo dhowaan loo magacaabay macalinka cusub ee xulka qaranka Brazil.
55 sanno jirkaan ayaa xilka ka bedelay Carlos Dunga ka dib markii uu kasoo tegay kooxda Corinthians oo uu kalkiisii seddaxaad hogaaminayey.
Dunga ayaa laga raacdeeyey shaqada tababarenimo ee Samba Boys ka dib markii ay ku guuldarreysteen inay kasoo baxaan ciyaaraha group-yada bandhigga Copa America ee ka socda Mareykanka.
Tite ayaa guulo kala duwan ku riyaaqay seddax kal oo kala duwan oo uu tababare u noqday kooxda Corinthians, wuxuuna la qaaday koobka Campeonato Brasileiro sannadkii 2015kii, halka uu sidoo kale kooxdaan ku hogaamiyey hanashada Copa Libertadores iyo FIFA Club World Cup sannadkii 2012kii.
Kulankiisa ugu horreeya ee uu leyliyo xulka Brazil wuxuu dhici doonaa bisha September ee sannadkaan markaasoo ay ka hor imaan doonaan xulka Ecuador ciyaar isreebreebka Koobka Adduunka 2018ka ah.